ल हेर्नुस पकिस्तानकै इतिहाँसमा पहिलोपटक लेफ्टिनेन्ट जनरल पदमा पुगिन यी महिला – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > ल हेर्नुस पकिस्तानकै इतिहाँसमा पहिलोपटक लेफ्टिनेन्ट जनरल पदमा पुगिन यी महिला
ल हेर्नुस पकिस्तानकै इतिहाँसमा पहिलोपटक लेफ्टिनेन्ट जनरल पदमा पुगिन यी महिला
admin July 1, 2020 अन्तराष्ट्रिय, जीवनशैली	0
मेजर जनरल निगार जोहर पाकिस्तानी सेनाको इतिहासमा लेफ्टिनेंट जनरलको पदमा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी छिन । पकिस्तानी सेनाको अन्तर सेवा सार्वजनिक सम्बन्ध (आईएसपीआर) लाई उद्धृत गर्दै एआरवाई न्यूजले भनेको छ, “मेजर जनरल निगार जोहरलाई लेफ्टिनेन्ट जनरलका रूपमा पदोन्नती गरिएको छ ।”
पाकिस्तानी सेनाको सञ्चार शाखाका अनुसार जोहरलाई पाकिस्तानी सेनाको पहिलो सर्जन जनरलका रूपमा पनि इतिहास बनाएकी छिन् । जोहर पाकिस्तानको ख्यवरपाख्तुङ्ख्या राज्य स्वावी जिल्ला, पञ्जपीरका स्थायी वासिन्दा भएको आइएसपीआरले आफ्नो ट्वीटर पेजमा उल्लेख गरेको छ । उनी मेजर जेनरलमा सन् २०१७ मा पदोन्नती हुँदा उक्त पदमा पुग्ने तेस्रो महिला बनेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाए
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएका छन् । उनले राजनीतिक परामर्शका लागि भन्दै मन्त्रीहरुलाई बिहान ८ बजे बालुवाटार बोलाएका हुन् । मंगलवार स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो । बैठकमा शीर्ष नेतासहित १७ जनाले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए ।
ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन माग गरेपछि बुधवार (आज) ओलीले राजनीतिक परामर्शका लागि मन्त्रीहरुलाई छलफलमा डाकेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले साढे २ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ओलीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको भन्दै शीर्ष नेताहरुले राजीनामा माग गरेका थिए ।
सरकारको सुझाव के छ ?
प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले सलह आएको थाहा पाउनासाथ पालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र वा स्थानीय निकायमा सूचना दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै सलहबारे समुदायमा जानकारी दिन र घरको झ्याल ढोका थुन्न केन्द्रको सुझाव छ । केन्द्रका अनुसार भाँडाकुँडा, बाजा, लाउडस्पिकर बजाउने, आगो बाल्ने गरेर सलहको झुण्डलाई बस्नबाट रोक्न सकिन्छ ।
मालाथिन, ल्याम्डा साइहेलोथ्रीन, क्लोरपाइरिफोेस, डेल्टामेथ्रीन आदि पानीमा घोलेर छर्किन सकिने केन्द्रको सुझाव छ । धानको ब्याड, तरकारी आदिलाई भने जाली वा त्रिपालले ढाकेर राख्दा पनि हुन्छ । सलह प्रोटिनयुक्त भएकाले जम्मा गरेर हाँस, कुखराको आहारा बनाउन सकिने केन्द्रले जनाएको छ ।
घामै छेकेर आयो सलह, धुँवा र ढ्वाङ ठटाएर पनि भागेनन्
फेरि चिप्लियो बर्षाकाे जिब्रो, विदेशमा बसेका कलाकारहरूले बिरोध गर्दै भनेः के नेपाललाई माया गर्न नेपाल नै बस्नुपर्छ?
सुशान्तको घटनापछि गायक सोनु निगमले पहिलोपटक खोले अर्को सनसनीपूर्ण पोल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)